Doc Command ???? — MYSTERY ZILLION
Doc Command ????
ကဲ မော်မော်တို့၊ မင်မင် တို့ရေ.....
ကျွန်တော် သိချင်တာက Network ချိတ်ထားရင်းနဲ့ အခြားသော စက်တစ်လုံးလုံး ကို Shutdown ချရင် ဘယ်လိုချရသလဲဆိုတာရယ်။ Networking နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြား Command တွေကို သိချင်ပါတယ်။ ကူညီကြပါဦးနော်.
"မော်မော်တို့၊ မင်မင် တို့ရေ....." ဆိုတော့ ဒို့တွေမပါဘူးပေါ့နော် ....
remote desktop ကိုသုံးပါလား...........but
IP ကိုသိရမယ်.........သူ ့စက်က password မရှိဘူးဆိုရင်တော့ရပါတယ်................ကဲ...မော်မော် တို ့လည်းပြောကြပါ.....
Below is how to use shutdown command in cmd mode, you can do shutdown restart.
Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \_\_computername] [-t xx] [-c "c omment"] [-d up:xx:yy]
-i Display GUI interface, must be the first option -l Log off (cannot be used with -m option)
-s Shutdown the computer -r Shutdown and restart the computer -a Abortasystem shutdown
-f Forces running applications to close without war ning
-d [p]:xx:yy The reason code for the shutdown u is the user code p isaplanned shutdown code xx is the major reason code (positive integer le ss than 256) yy is the minor reason code (positive integer le ss than 65536)
ကျွန်တော်က မော်မော်တို့....မင်မင်တို့ကို ခေါင်းစဉ်သာတပ်တာပါ။ သူတို့ခမျာလည်းမအားဘူးဆိုတာသိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိတဲ့ ကိုကို...မမ....ညီငယ်များကလည်း ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Don't you get it? I explained since I found your post. It is included in cmd command
will shutdown your computer
will abort above command shutdown -s
will show GUI and you can add remote computer name to shutdown
Why don't just check it out.:65::65::65::65:
အော်ဒါကတော့ဒီလိုရှိပါတယ် ကိုကြီး ကျော်ဇင်က တာဝတိန်သာကဆိုတော့ Eng သိပ်မရလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် တနေ့တနေ့ နတ်သမီးတွေပဲထိုင်ထိုင်ကြည့်နေလို့ အမရဲ့ post ကို မျက်စိရှမ်းသွားတာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲ
ဆောရီးဗျာ.....ကျွန်တော်လည်း ကို အိုင်းစတိုင်းပြောသလို တစ်နေ့နေ့ နတ်သမီးတွေပဲ ထိုင်ကြည့်နေရတော့ မျက်စိလျှမ်းသွားတယ်။ (အဟီး.....) ဆောရီးနော်....ကျွန်တော် လက်တွေ့အသုံးချကြည့်လိုက်ပါ့မယ်။ အခုလို ကူညီတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။